Wararkii ugu dambeeyay dagaaladii ka dhacay duuleedka Degmada Buula burte ee Gobolka Hiiraan. | Weheliye Online
Wararkii ugu dambeeyay dagaaladii ka dhacay duuleedka Degmada Buula burte ee Gobolka Hiiraan.
Hiiraan(weheliye Online)-Saraakiisha hogaamineysay weerarkii shalay lagu qaaday daalamayaasha Al-shabaab ayaa faahfaahino dheeraad ah ka bixiyay dagaalo culus oo shalay ciidamada dowladda iyo kuwa Al-shabaab ku dhexmaray deegaanka Ceelbacad oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Buula burte.
Jenaraal Teerdishe oo ah taliyaha ciidamada qeybta 27-aad oo la hadlayay warbaainta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dagaaladii shalay aay ciidamada Xoogga dalka guulo waaweyn ka gareen.
” Jab xoogan ayaan gaarsiinay Shabaab hub farabadan iyo gadiidna waan ka furanay askar 25 ka badana waan ka dilnay walina deegaanada u dhaxeeya Buula burte iyo Jalalaqsi ciidanka Xoogga dalka ayaa howlgalo ka wado” ayuu yiri Jenaraal Tereedishe.
Jenaraalka ayaa intaasi ku sii daray in weerarka aay ciidamada Xoogga ku qaadeen deegaanka Ceelbacad uu yimid kadib markii aay ka war heleen abaabulka weeraro qorsheysan oo aay Al-shabaab kuso qaadi rabeen degmada Buula burte.
Ciidamada dowlada iyo kuwa macawisleyda hiiraan oo is kaashanaya ayaa howlgalo ka wado wadada dheer ee xariirisa dagmada Buula Burte iyo Jalalaqsi,halkaas oo shalay ka dhacay dagaal aad u culus oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyobCiidanka Xooga Dalka.
Wararkii ugu dambeyay ee maanta laga helaayo wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Buula burte iyo Jalalaqsi ayaa sheegaya in halkaasi lagu arkaayo ciidamada dowladda oo howlgalo ka wada wadadaasi.
Previous articleKalluumeysatada Dagmada Eyl oo cabasho xoogan ka muujiyay kullun nuucyo qaar ay ka waayeen Badda iyo maraakiin waaweyn oo si sharci darro ah uga kalluumeysta xeebaha Nugaal.
Next articleKu dhawaad 22 qof oo ku geeriyootay Dooni ku dagtay Dalka Tunisia.